နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဘယ်လိုဆင်နွှဲမလဲ? – How She Did It
BlogCareer-loving WomenWomen EntrepreneurshipWork-life Integration |2mins
ဒီနှစ် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ရဲ့ ခေါင်းစဉ်က #BalancedForBetter ဖြစ်တယ်။ Balanced ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မျှတမှုရှိတာ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တာ။ Gender Equality Network ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကျွန်မအရမ်းသဘောကျမိတယ် – “လူမှုဘဝပိုကောင်းဖို့ ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်စို့” တဲ့။ ဒါဆိုဘယ်နေရာမှာ ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲ? ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်သုံးခုကို ပြောပြမယ်နော်။
၁)Equality Starts at Home
ကျွန်မတို့တွေ women empowerment လုပ်တဲ့အခါတိုင်း men empowerment ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့်ရလာတဲ့အခါ၊ အမျိုးသားတွေကို မိသားစုဘဝထဲမှာ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်အောင် အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးဖို့လည်းလိုတယ်။ ကျွန်မမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ အရမ်းအံ့သြသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံတယ် .. ဖခင်တစ်ယောက်ပြောတယ်၊ သူ့ကလေးဘာကြိုက်တတ်လည်းသူမသိဘူးတဲ့။ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ကလေးတစ်ခုခုလိုရင် မိခင်ကအရင်လုပ်ပေးနေကျဆိုတော့ ကလေးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် သူဘာမှမသိတော့ဘူး။ ကလေးနဲ့ဆော့မယ်၊ လိုအပ်လာရင် မိခင်ဆီပေးထားလိုက်မယ်ဖြစ်သွားတော့ ကလေးရော၊ ဖခင်ပါ နှစ်နာမှုတွေဖြစ်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖခင်ရဲ့ပြုစုယုယမှုကို သိပ်မသိတော့ဘူး။ ပျော်တဲ့အချိန်မှာရှိပေးတာကောင်းပေမယ့်၊ ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ၊ လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အခါ ဖခင်တစ်ယောက်ဆီပြေးပြီး ငိုချလို့ရတယ်၊ ဖေဖေဆိုတာ ကြောက်ရမယ့်လူမဟုတ်ဘူး၊ ပျော်ဖို့သက်သက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ ဖေဖေလည်း ကြင်နာတတ်တယ်၊ ဖေဖေလည်းနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ နွေးထွေးမှုမရတော့ဘူး။ ဖခင်အနေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုက ကလးတစ်ယောက်ကို အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ ဘဝသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရတယ်။ သိပ်နုနယ်တဲ့အရွယ်မှာ ဂရုတစိုက်ချီပွေ့ရတာတွေဟာ သေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုပါ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေတယ်။ အရင်ကအသံကျယ်ကျယ်ပြောတတ်ပေမယ့် ကလေးသိပ်ဖူးတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့အသံကြောင့်၊ အမူအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို နားလည်တတ်လာတယ်၊ ဂရုစိုက်တတ်လာတယ်။ အရင်ကဝင်ငွေတွေကို မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတတ်သူက ကလေးကျောင်းထားရတော့မယ် ကျောင်းတွေလိုက်လေ့လာရအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာ ကလေးရဲ့ရှေ့ရေးကို နောက် နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထိပြေးပြီးတွေးတတ်လာတယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် အလုပ်လုပ်ငွေဆုဖို့ သူ့အလိုလိုတွန်းအားတွေရလာတယ်။ ဒါတွေဟာ ကလေးနဲ့ဖခင် ရင်းနီးမှုရှိမှ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့မိခင်တွေ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အခွင့်အလမ်းတွေရှာနေချိန်မှာ ဖခင်တွေကိုလည်း အခွင့်အရေးပေးပါ။ ကလေးကိုထမင်းကျွေးဖူးမှ ကလေးကြိုက်တတ်တာတွေ သိလာမယ်၊ ကလေးကိုစာဖတ်ပေးဖူးမှ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးကို နားထောင်ပြီး၊ သူ့ကိုဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ ဆိုတာတွေကို နားလည်လာမယ်။ ကလေးငိုနေတာကို ဖခင်ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားပြီးသိပ်နေချိန်မှာ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အားပေးပါ၊ သင်ပေးပါ။ ကိုယ်တွေလည်းဒီလိုပဲ မနိုင်မနင်းလုပ်ရင်းနဲ့ ကလေးထိန်းတဲ့အနုပညာမှာ ဆရာမကြီးတွေဖြစ်လာတာပဲ မဟုတ်လား။ ဖခင်တွေကိုလည်း လေ့ကျင့်ခွင့်ပေးမှ သူတို့လည်း ကလေးထိန်းတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတွေဖြစ်လာမယ်လေ။
ဒီလို မျှတတဲ့မိသားစုဘဝကနေကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူတို့ဘဝမှာ ရွေးချယ်မှုတွေပိုများလာတယ်။ မိန်းကလေးမို့ ဒါမလုပ်ရဘူး/ ယောင်္ကျားလေးမို့ ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာထက်၊ မေမေလည်းဒါတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဖေဖေလည်းဒါတွေ လုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့် သားတွေသမီးတွေမှာလည်း ရွေးချယ်ပိုင်းခွင့်တွေရှိတယ်။
၂)Women in Workforce
အမျိုးသမီးတွေ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်လာကြတာကို မြင်ရတော့ ဝမ်းသာမိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ကိုယ်အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာမပျော်မွေ့ရင်တောင် အလုပ်လုပ်တာကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းအတွက်မဖြစ်သင့်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်လုပ်သင့်တယ်။ အလုပ်ကနေ သင်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေဟာ ဘယ်သင်တန်းကျောင်းကမှမသင်ပေးနိုင်ဘူး၊ မိသားစုဘဝကနေလည်း မရဘူး။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေမှာ work identity ရှိဖို့တည်ဆောက်ရမယ်။၊Identity ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူမှုတစ်ခု/ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှု။ Ideantity ကိုဖော်ပြတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ တွဲပြီးပြောလို့ရတယ် (Relationship identity) ဥပမာ – ဘယ်သူ့ရဲ့သမီး၊ ဘယ်သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီး/ချစ်သူ၊ ဘယ်သူ့ရဲ့မေမေ။ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်အစဉ်းနဲ့တွဲပြီးပြောတယ်(Physical attribute identity) – ဆံပင်ရှည်တယ်၊ ပိန်တာ/ရှည်တာ၊ တန်မာတာ။ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်နဲ့တွဲပြီးဖော်ပြတယ် (Personality identity) – စိတ်ရှည်တယ်၊ နားလည်ပေးနိုင်တယ်၊ စကားပြောဆိုဆက်စံတတ်တယ်။ ဒါတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်၊ ကိုယ်နှစ်သက် ဂုဏ်ယူတဲအြရာတွေနဲ့ တွဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူမှုတစ်ခုရှိတာ။ ဒါပေမယ့် Skills/Talent/abilities/aspiration ဆိုတဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လည်း တွဲသင့်တယ်။ ဥပမာ – event management လုပ်တတ်တယ်၊ HR ပညာရှင်တစ်ယောက်၊ Beauty blogger တစ်ယောက်၊ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်၊ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်၊ peace advocate တစ်ယောက်။ အဲ့ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ work identity ရှိလာတဲ့အခါ သူ့ဘဝကဟန်ချက်ညီလာတယ်၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေများလာတာဟာ လူမှု့ဘဝကို အများကြီးပိုကောင်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိခင်တွေဟာ နောင်လာမယ့် generation ကိုပိုကောင်းအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တာပေါ့။
၃)Women in Leadership
အမျိုးသမီးတွေ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှာ နေရာယူလာနိုင်တယ်၊ ဒါဟာ လူမှုဘဝအတွက်နှစ်မျိုးကောင်းစေတယ်။ (၁) Power of representation ဆိုတာ ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဥပမာ – NASA မှာ Mars ဂြိုလ်ကိုလွှတ်ဖို့ တည်ဆောက်တဲ့ ဒုံးပျံယာဉ်ကို ဦးဆောင်ပြီးတည်ဆောက်သူဟာ မမီမီအောင်ဆိုတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာ သိရတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အားကျအတုယူစရာ ဖြစ်စေတဲ့အပြင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးဂုဏ်ယူမိတဲ့စိတ်ဖြစ်စေတယ်၊ နောက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေတယ်။ တစ်ချိန်မှာသိပ္ပံနည်းပညာရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ သမီးငယ်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း သူကြိုးစားရင် သူလည်းဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အရှေ့မှာ လမ်းဖောက်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက် သူ့ကြိုးစားမှာကို ပိုပြီးမောင်းတင်ချင်စိတ်ရှိတယ်။(၂) Champion for change – လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဦးဆောင်မှုနေရာကိုရောက်နိုင်ဖို့ အများကြီးဖြတ်ကျော်ရတယ်၊ အမျိုးသားတွေနဲ့မတူ အဖက်ဖက်ကရိုက်ခက်မှုကို ကြုံရတယ်။ ထိပ်ကိုရောက်ဖို့သွားနေတုန်းမှာရော၊ ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရော ဆက်ပြီးကြုံနေရတယ်။ အရည်အချင်းရှိပေမယ့် လက်အောက်ငယ်သားတွေဆီက ထိုက်တန်တဲ့လေးစားမှုမရတာ၊ လက်တွဲဖော်ရဲ့ ငြိုငြင်မှုတွေကြုံရတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောဆိုမှုခံရတာ။ ဒါတွေဟာ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ လုပ်ရက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲ လူတွေရဲ့အမြင်မပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့် သူ့အပါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာ။ ဒီလိုကြုံလာရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတာတွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်တယ်၊ ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံရသူတွေက ပြောင်းလဲမှုကိုပိုပြီး အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်တယ်။ ခက်ခဲလည်း ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူမှုဘဝပိုကောင်းဖို့ဆိုရင် အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအများကြီး ဦးဆောင်မှုနေရာမှာ တာဝန်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။
ဒီနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျားမရေးရာမှာ ဦးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်သူတွေကို Gender Equality Network က Champion of Gender Equality ဆိုတဲ့ဆုကို နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့မှာ ချီးမြှင့်ဖို့ရှိတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီဆုကိုရထိုက်တဲ့သူ/ရထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဆိုရင် စာရင်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ GENလို အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုရဲ့ ဆုချီးမြှင့်ခံရတယ်ဆိုတာ ဆုရတာထက်၊ သူ့ရဲ့လုပ်အား၊ ဉာဏ်အား နဲ့ ယုံကြည်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်တက်ရောက်တယ်။ ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် လူမှုဘဝကိုပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Change Champion တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်။ ဘယ်သူတွေကိုပေးရမလဲမသိရင် ကျွန်မအနေနဲ့ ရွေးချယ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ် –
ညီမလေး Nandar . ဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ feminism အကြောင်းပိုပြီးသိနားလည်နိုင်အောင်၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မေ့လျှော့နေတဲ့တန်ဖိုးတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေအကြောင်းကို လေ့လာနားလည်လို့ရအောင် We Should All Be Feminists ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ထားသူပါ။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာဖြတ်သန်းလာရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု အတွေ့အကြုံအားလုံးကို ကျွန်မတို့တွေအားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းစာပေအနေနဲ့ရော၊ စကားဝိုင်းအနေနဲ့ပါ ဗဟုသုတတွေဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုချင်တဲ့သူရှိရင် ဒီ link ကနေ စာရင်းပေးပြီး nominate လုပ်ပါ။
#HowSheDidIt #GenderEqualityNetwork #BalanceForBetter #GenderEqualityAtHome #WomenInWorkforce #WomenInLeadership